by Isebe likarhulumente wase-US
Iziqithi zafunyanwa kuqala ngabaqhubi bamaPhuthuke phakathi kwe-1469 no-1472. Ukuhlaliswa okuphumelelayo kweSão Tomé kwaqulunqwa ngo-1493 ngu-Alvaro Caminha, owathola ilizwe njengegranti evela kwintsaba yesiPutukezi. I-Príncipe yazinziswa ngo-1500 phantsi kwelo lungiso. Ngeli-1500s, ngoncedo lwabakhoboka, abahlali basePutukezi babeguqulele iziqithi zibe yi-Afrika eyona mthengisi omkhulu ushukela.
I-São Tomé nePríncipe zathathwa kwaye zilawulwa yithsaba yesiPutukezi ngo-1522 no-1573, ngokulandelanayo.
Ukulima kwe-Sugar kunqabile kwiminyaka eyi-100 eyalandelayo, kwaye nge-1600s, iSão Tomé yayingekho ngaphesheya kwechweba lokubiza iinqanawa ze-bunkering. Ekuqaleni kwee-1800, izityalo ezimbini zemali, ikhofi kunye necocoa, zaziswa. Ihlabathi elityebileyo leentaba-mlilo libonakalise ngokufanelekileyo kwi-shishini elitsha lezityalo, kwaye ngokukhawuleza isityalo ( rocas ), esineenkampani zasePutukezi okanye abanikazi bezindlu ezingabikho, zihlala phantse zonke iifama ezilungileyo. Ngowe-1908, uSão Tomé wayebe ngumlimi omkhulu we-cocoa, kodwa isityalo esona sibaluleke kakhulu.
Ubukhoboka kunye Nemisebenzi Eqeshwe Ngaphandle kweNkqubo yeRocas:
Inkqubo ye- rocas , eyanika abaphathi bezityalo igunya eliphezulu, bekhokelela ekuhlaseleni abasebenzi basefama base-Afrika. Nangona iPortugal yachithwa ngokusemthethweni ubukhoboka ngo-1876, ukuqhutyelwa komsebenzi ohlawulwa ngokunyanzeliswa kwaqhubeka.
Ekuqaleni kwee-1900, kwavela ingxabano ephasanyiswa ngamazwe ngamazwe ngenxa yokuba izityikethi zabasebenzi base-Angola ziphantsi koxinzelelo lwabasebenzi kunye nezimo zokusebenza ezinganelisekanga.
Ukuxhatshazwa kwezabasebenzi kunye nokungazineliseki kwaqhubeka ngokuqhubekayo kwinkulungwane ye-20, ekugqibeleni ukugqitywa kwezibambano ngo-1953 apho abasebenzi abaninzi baseAfrika babulawa xa bexabana nabalawuli babo basePutukezi.
Le "Batepá Massacre" isisiganeko esikhulu kwimbali yezobuqhophololo, kwaye urhulumente uyawubona ngokusemthethweni isiganeko sakhe.
Ngasekupheleni kweminyaka ye-1950, xa ezinye iintlanga ezivela kwilizwekazi laseAfrika zifuna ukuzimela, iqela elincinane laseSão Toméans lenze iMovimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (iMLSTP, uMbutho woKhululwa kweSão Tomé nePríncipe), ekugqibeleni wasungula isiseko sayo kufuphi neGabon. Ukunyuka kwimihla ngemihla yama-1960, iziganeko zashukunyiswa ngokukhawuleza emva kokuchithwa kwe-Salazar neCaetano yokunyanzela ePortugal ngo-Apreli 1974.
Ukuzimela Kuvela ePortugal:
Umbuso omtsha wasePortugal wenziwa kwi-colonies yamanye amazwe; NgoNovemba 1974, abameli babo badibene ne-MLSTP e-Algiers baza benza isivumelwano sokudluliselwa kolawulo. Emva kwexesha lombuso wenguqu, uSão Tomé noPríncipe bafumana ukuzimela ngo-12 Julayi 1975, bakhetha njengoMongameli wokuqala we-MLSTP, uNobhala Jikelele we-MLSTP, uManuel Pinto da Costa.
Ngowe-1990, uSão Tomé waba ngenye yamazwe okuqala ase-Afrika ukufumana ukuguqulwa kwentando yesininzi. Utshintsho kumgaqo-siseko kunye nokusemthethweni kwamaqela aphikisayo, kukhokelela ekubeni unyulo olungenamthetho, lukhululekile, lube lubala ngo-1991.
UMiguel Trovoada, owayenguNdunankulu owayesethunjweni ukususela ngo-1986, wabuya njengomviwa ozimeleyo kwaye wakhethwa nguMongameli. I-Trovoada yamiselwa kwakhona okhetho lwesibini oluphindaphindayo lukaSão Tomé ngo-1996. I- Partido de Convergência Democrática PCD, iPublic of Democratic Convergence) yathintela i-MLSTP ukuthatha ininzi yezihlalo kwi- Assembleia Nacional (iNational Assembly).
Ngomthetho wokhetho lwangaphambili ngo-Oktobha 1994, i-MLSTP yanqoba izihlalo ezininzi kwiNdibano. Iphinde yafumana ininzi yezihlalo kwiNyulo kaNovemba ka-1998. Ukhetho lukaMongameli lwaqhutyelwa kwakhona ngoJulayi 2001. Umviwa oxhaswe yi-Independent Democracy Party, uFradique de Menezes, ukhethwa kwinqanaba lokuqala waza wavulwa ngomhla we-3 kuSeptemba. Unyulo lwePalamente oluye lwaqhutywa ngo-Matshi 2002 lukhokelela kurhulumente wobumbano emva kokuba akukho nxaxheba athola ininzi yezihlalo.
Ukwaphulwa kwamazwe ngamazwe weSiqendu sesimo:
Umzamo wokubambisana ngoJulayi 2003 ngamalungu ambalwa omkhosi kunye noFrente Democrática Cristã (FDC, Christian Democratic Front) - ngokukodwa abamele abavolontiya baseSão Toméan ababevela kwiRiphablikhi yeRiphabhuliki yaseMzantsi Afrika. kumazwe ngamazwe, kuquka iMelika, ukulamlamlana ngaphandle kwegazi. NgoSeptemba 2004, uMongameli kaMenezes wamgxotha uNdunankulu waza wamisela ikhabhinethi entsha, eyamkelwa yinkoliso yamaninzi.
Impembelelo yeeMpahla zoLimo kwi-Political Scene:
NgoJuni 2005, emva kokungahambisani noluntu kunye neelayisensi zokuhlola ioli kunye neNigeria yoPhuhliso (JDZ) neNigeria, i-MLSTP, iqela elinenani elikhulu lezihlalo kwiNdibano yesiZwe, kunye nabalingani balo bebumbano babesongela ukuba bayeke uhulumeni kunyulwa kwepalamente. Emva kweentsuku ezimbalwa zokuxoxisana, uMongameli kunye neMLSTP bavuma ukuseka urhulumente omtsha kunye nokuphepha ukhetho lokuqala. Urhulumente omtsha waquka uMaria Silveira, intloko ehloniphekileyo yeBhanki Ephakathi, owakhonza ngokukhawuleza njengoNkulumbuso kunye noMphathiswa wezeMali.
Unyulo lukaMatshi luka-2006 lwaluqhubela phambili ngaphandle kwenqatha, kunye noMongameli uMenezes, i- Movimento Democrático das Forças da Mudança (MDFM, uMbutho weDemocratic Force of Change), ukufumana izihlalo ezingama-23 nokuthatha inkokeli engalindelekanga phambi kwe-MLSTP. I-MLSTP yeza kwesibini kunye nezihlalo ezingu-19, kwaye i- Acção Democrática Independente (i-ADI, i-Independent Democratic Alliance) yafika kwisithathu kunye nezihlalo ezili-12.
Phakathi kokuxoxisana ukuseka urhulumente omtsha wokubambisana, uMongameli uMenezes wakhetha inkulumbuso entsha kunye nekhabhinethi.
NgoJulayi 30, 2006 kwaphawula uSo Tomé noPríncipe okwesine ngentando yeninzi, okhethweni lonyulo lukazwelonke. Unyulo lwabanjwe ngababoni basekuhlaleni, nakwamanye amazwe njengabakhululekile kunye nabangelungileyo kunye ne-Inclosal Fradique de Menezes yamenyezelwa ngokuphumelela malunga nama-60% evoti. Ukuvota ukuvota kwakuphezulu kunye nabangama-63% kwabangu-91, 000 abavoti abhalisiweyo abavoti.
(Umbhalo ovela kwi-Public Domain material, iSebe laseNtshonalanga yeSebe lase-US Notes Notes).
Ukwahlula ngokobuhlanga phantsi kobuhlanga
Indima yePlaza kwimikhosi yamaMaya
Imbali yoMongameli kaMongameli
Iifrafti kwiiShicilelo zeeSigqibo
Hlola i-Antarctica Hidden Lake Vostok
Indlela yokugcina i-Mabon Apple Harvest Rite
Ukuqonda amaNqaku eendaba
Isiqulatho sesiqhelo (isalathisi)
Indlela yokufumana imfundo yabantu abadala kunye nokufumana i-GED yakho eTexas